Shiinaha Diyaar U Ah Inuu Maraakiibta Microfiber Suede Anti Fog Glass Tiping Maro for Muraayadaha Muraayadaha Muraayadaha Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Wada-eeg
Diyaar u ah Ship Microfiber Suede Anti Fog Glasses Masaxa Maro loogu talagalay Muraayadaha Muraayadaha indhaha
Lambarka tusaalaha: AFC01
Saamaynta ka-hortagga ceeryaanta: 8-24 saacadood
Isticmaalida waqtiyada: dib loo isticmaali karo ilaa 300 jeer
Magaca sumadda: aqbal qaabeynta astaanta
Cabbirka dharka: 135 * 145mm
Midabka dharka: kareem ama cawl
Dharka geeska: zigzag
Cabbirka boosta-qufulka: 88 * 134mm
Miisaanka: Ku saabsan 9.1g / kumbiyuutarada
Codsiga: ceeryaanta Anti iyo muraayadaha nadiifinta
MOQ: 1pcs oo aan lahayn qalabayn / 2,000pcs oo loogu talagalay astaanta embossed ee dharka / 5,000pcs loogu talagalay xirmaynta xirmada
Xirashada wejiga wajiga
Muraayadaha ku habboon:
Muraayadda muraayadaha, muraayadaha dahaarka leh, muraayadaha indhaha ee muraayadaha indhaha, muraayadaha dabiiciga ah, muraayadaha dabiiciga ah, muraayadaha indhaha, muraayadda musqusha, koofiyadda iyo muraayadaha indhaha ee daahfuran iyo caag ah
Ogeysiisyada: kuma haboona kuwa leh huurka hydrophobic iyo lipophobic
Polymer dabiici ah iyo titanium dioxide firfircoon (oo ka samaysan waxyaabo cagaaran iyo bey'ada u fiican, oo aan waxyeello u lahayn jidhka bini'aadamka, muraayadaha indhaha iyo muraayadaha indhaha iwm)
Fibre fiber fiber-ka waxaa ku jira maaddooyin gaar ah, kuwaas oo awood u leh inay ka hortagaan uumiga qoyaanka muraayadaha, oo aan mar dambe dhibaato ka soo gaarin ceeryaanta.
Muraayadda 1.Slean marka hore natiijada wanaagsan iyo waxqabadka
2.Ku nadiifi muraayad kasta 10 ilbidhiqsi si siman
3. Ku keydi dharka boorsada jeebka lagu rido oo la bixiyo oo la xidho
4.Haddii loo baahdo, ku celi tallaabooyinka 1 iyo 2
5.Fadlan ha dhaqin. Haddii aad u qalalan tahay, waxaad ku buufin kartaa xoogaa biyo ah.
Maradaan ka hortagga ceeryaanta waxaa ku jira maadada nano ee hi-tech iyo walxo. Dabeecadda badeecaddu waa mid deggan oo leh saameyn wanaagsan oo ka-hortagga ceeryaanta. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu tirtiro nooc kasta oo muraayadaha indhaha ah, taleefanka gacanta ah iyo shaashadda kombiyuutarka ah. Tirtiridda ka dib, waxay ka hortagi kartaa ceeryaanta ku samaysan muraayadda ama shaashadda. Sidoo kale, waxay ka hortagi kartaa ceeryaanta markaad xirto maaskaro wajiga oo aad u baxdo xilliga qaboobaha. Badeecadani waa mid aan badbaado lahayn oo aan waxyeello u lahayn caafimaadkaaga, oo aan wax xoq ah ama waxyeello ah u geysanaynin dusha muraayadaha indhaha, xuubka xaddidan ee qarxa, cusbi, caag iwm.
Xiga: New Korea Stylish Handmade Clear Round indhaha indhaha muraayadaha
Dhiirrigelinta iibka wanaagsan ee farsamo-yaqaannada laba jibbaaran ...
Naqshadeeye fashion jumlada OEM caadadii LOGO leat ...